Garaad Wiil Waal iyo Cali - BAARGAAL.NET
Garaad Wiil Waal iyo Cali
Kalkii xigay ee Garaadku gurigiisii usoo hoyday ayey maamuus ka dib u sheegtay wixii dhacay oo dhan. Waxay ku dhammaysay xogwarankeedii "nin kula caqli iyo hawaba ah ama noqon kara ayaa Bartire ku jira ee hooy qabka jooji." "Ninbaa xalay oo dhan i shukaansanayey oo go’aan ku gaadhay inuu iga kaa qaado." Garaadkii ayaa cadho cirkaa maray oo si qaadan waa iyo quudhsi ku jiro u yidhi "waa kuma ninkaasi habeenkaa caawa ah ayaan unuunkiisa jarayaaye?" Way u dajisay oo tidhi waxba inaad dagaalantid uma baahnid saa damac uu isagu i damco waa halkiisee, waxba iga qaadi mahayo aniguna doonimahayo isaga. Waxaanse kuu shegayaa calaamad aad ku garan doonto barrito marka tolku shirayo ee aad ragga Bartire isugu yeedho. Oo maxay tahay calaamadaasi ayuu weydiiyey? Afarta faraq ee go’iisa mid ka mid ah ayaan xalay aslay oo sidaa ayaad ku garan doontaa. Waayahay bal barito waxaan ku dhigo hala soo dhawro ayuu Garaadkii ku seexday.
Geedkii ayaa raggii isagu yimid. Cabbaar haddii uu fiirfiiriyey waxay markiiba ishiisu qabatay barbaar gooni ragga uga fadhiya oo aad moodo inuu xadraynayo. Waa sidee saaxiib, maxaad ugu lulmoonaysaa shirka dhexdiisa? Miyaadan xalay seexan? ayuu Garaadkii weydiiyey. Talo faro ka haaday, ma is tidhi? Maya, kama haadin ee Cali nin garashadiisu gaashaan qaad tahay ayuu ahaaye markiiba wuxuu gartay ujeedada hoose ee su’aasha Wiil Waal, si degani iyo kalsooniyi ku jirtana ugu jawaabay “maya Garaad ma lulmoonayo ee waan hammiyey." Oo maxaad ku hammiday ayuu si cadho ku jirto u weydiiyey? "Waxaan ku hammiyey; lugo goroyo ma horaa, mise waa dib” ayuu si dhiiran Cali ugu jawaabay.
Cali isagoo raba inuu jawaabo oo is xujo bixiyo ayaa intuusan wali hadlin Garaadkii hadalkii mar kale qaatay oo soo jeediyey dhammaan guurtidii geedka fadhiday isagoo leh: "Bartirow i maqal, haddii tii Rabbi ii timaado waxaad hoggaamiye ka dhigataan oo aad doorataan wiilkaa yar, maxaa yeelay waa nin garasho culus oo aan iga dhicin dabagalkiisana aydaan ku khasaaraynin."